– समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ । बैठक बुधबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा सुरु भएको हो । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, समायोजन निर्देशिका, आर्थिक व्यवस्थापन लगायतका एजेण्डा रहेको जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
– सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले लकडाउनको घोषणा गरेको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी एक हप्ताको लागि लकडाउन घोषणा गरिएको धरान उप–महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफू पार्टीको कुनै पनि गुटमा नलाग्ने बताएका छन् । मंगलबार विहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफ्नै निवासमा भएको भेटमा उनले आफू कुनै सानो ठूलो गुटमा नलाग्ने बताएका उनका सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका परिकल्पनाकार डा. बाबुराम भट्टराईले ओली सरकार समाजवादको बाटो छाडेर आसेपासे पुँजीवाद विकृत बाटोतिर लागेको बताएका छन् । आफूले सिंगापुरको अभ्यासलाई हेरेर लगानी बोर्डको परिकल्पना गरेको तर, बोर्ड आफूले सोचेजस्तो नबनेको डा। भट्टराईको प्रतिक्रिया छ ।
– स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्षेत्र हेरेर लकडाउन गर्न र संक्रमण बढे सम्बन्धित स्थानमा सिल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिका सदस्य र राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित बैठकमा मंगलबार विज्ञहरूले अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर बढाउन पनि जोड दिएका छन् ।
– मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेश रोकिएको छ । सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न वितरण गरिने पास रोकिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको खतरालाई मध्यनजर गरेर सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
– अदालतमा पेशी तोकिएको दिन बिहानै बुटवल उपमहानगरपालिकाले विवादित घरमा डोजर चलाएर भत्काएकामा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आपत्ति जनाएका छन् । उपमहागरको निर्देशनमा साविक वडा नं ११ (हाल वडा नंं. ९) कालिकापथमा रहेको खिमबहादुर हमालको घर बुधबार बिहानै सुरक्षा घेरामा भत्काइएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका रुपन्देहीका सांसद खाँडले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेको घर पेशी तोकिएकै दिन डोजर चलाएर भत्काउनु निन्दनीय भएको बताए ।
– कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा अनिश्चितकालका लागि लकडाउन गरिएको छ । मंगलबार स्वास्थ्यकर्मीसहित चौकीदार र भान्छे लगायत ७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अनिश्चितकालका लकडाउन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्षले जानकारी दिए ।
– राष्ट्रिय जनमोर्चाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि लकडाउन समाधान नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सामाजिक दुरी कायम गर्न र उपचारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
– महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेपछि विभाग गठन र त्यसलाई पूर्णता दिने काम भएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सभापति देउवा भने थप विभाग गठनको तयारीमा जुटेका छन्। यसअघि २० विभाग गठन गरिसकेका देउवाले तत्काल थप केही विभागको संयोजक घोषणा गर्ने गरी आन्तरिक छलफल सुरु गरेका हुन्।